xeriirka cusub ee dowladda Federalka iyo Puntland – Somali Top News
Deg Deg: Gudoomiyaha cusub ee Baarlamaanka Puntland oo la doortay
xeriirka cusub ee dowladda Federalka iyo Puntland
January 8, 2019 January 8, 2019 Somali Top News	0 Comments
Iyadoo maanta uu Siciid Cabdullaahi Dani ku guuleystay doorashada xilka madaxweynaha ee maamul goboleedka Puntland ayey dad badan isweydiinayaan sida uu noqon karo xiriirka ka dhaxeyn doona maamulkiisa iyo dowladda federaalka ee Soomaaliya.
In kastoo bilihii lasoo dhaafay ay sii wiiqmeysay awoodda iskaashi ee maamul goboleedyada, haddana maxaa laga filan karaa Madaxweyne Dani, tallaabo noocee ah ayuuse qaadi doonaa maamulkiisa?.
Maxamed Nuur Caalin, oo aqoon dheer u leh Siciid Candullaahi Dani, isla markaana horay ula soo shaqeeyay ayaa sheegay in uu Siciid yahahay nin 30-kii sano ee ugu dambeysay ku sugnaa gudaha dalka Soomaaliya isla markaana siyaasadda ku soo biiray dabayaaqadii 1990-meeyadii.
Hase ahaatee marka la eego xiriirka dhex mari kara isaga iyo dowladda uu hoggaamiyo Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayuu ku tilmaamay mid aan waji fiican lahayn.
“Markaad eegtid madaxweyne Farmaajo iyo mas’uuliyiinta hadda maamulka haya, haddii la is barbar dhigo Siciid iyo Cabdiwali Gaas, waxaa maamulka Farmaajo aad ugu dhow Cabdiwali Gaas. Sababtoo ah Siciid waa nin aad u aaminsan qadiyadda federaaleynta, waa nin aad ula dhacsan hannaanka ay ku socdaan kooxda hadda mucaaradka ku ah dowladda dhexe, waa nin Farmaajo kula loollamay doorashadii madaxweynaha federaalka, wax soo dhaweyn ah kama uusan helin dowladda Farmaajo, marka waxaan filayaa in Siciid meeshii uu ka taagnaa khilaafka u dhexeeyay Federaalka iyo maamul goboleedyada uu meel kasii fog ka istaagi doono”, ayuu yiri Mr Caalin.
Ol’olaha ka dhanka ah madaxda dowladda Federaalka
Dhanka kale Maxamed Nuur Caalin ayaa xusay in madaxweynaha cusub ee Puntland loo doortay uu yahay qof u dhow garabyada mucaaradka ee dhaqdhaqaaqyada ka wada Soomaaliya.
“Waxaa lagu tiriyaa iney isku dhow yihiin madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud, waxayna ila tahay in hadda uu ku biiri doono kooxda isbaddal doonka ah ee u xusul duubeysa in wax laga baddalo dowladda Muqdisho fadhisa” ayuu yiri.
Hase ahaatee waxa la sugaba waa wajiga uu rasmi ahaan u yeelan doono xiriirka maamulka Puntland, ee madaxweynaha cusub loo doortay maanta iyo dowladda Federaalka, oo iyadana la rumeysan yahay iney isha ku heysay natiijada doorashada.
← Madaxweyne Farmaajo oo hambalyo u diray madaxda cusub ee Dowlad Goboleedka Puntland
Turkey seeks to mediate Somalia and Somaliland →
Gocasho gaaban Garoonka Kubadda cagta ee Istaadiyo Muqdisho